Global Voices teny Malagasy » Tonizia, Alzeria: Tsy havoaka amin’ny fahitalavitra ny revolisiona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Janoary 2011 13:54 GMT 1	 · Mpanoratra Hisham Almiraat Nandika Candy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Alzeria, Tonizia, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Politika, Tanora, Zon'olombelona
Nisarika ny fifantohan-tsain'ny mpitoraka blaogy any amin'ireo firenena roa tonta ireo ny fanoherana any Tonizia sy Alzeria. Toa mitàna toerana lehibe eo amin'ny fitantaràna ireo tranga miseho momba ny sivana mahery vaika mihatra amin'ny haino aman-jery mahazatra (matetika an'ny fanjakàna) sy ny aterineto ny media sosialy. Indro misy topimaso amin'izay voalaza tao amin'ny tontolon'ny blaogy any an-toerana nandritra ny andro vitsivitsy farany teo.
Raha vantany vao nivoaka ny vaovao momba ny fampiasàn'ny tafika bala sy tifitifitra amin'ireo mpitolona tsy manam-pitaovam-piadiana, nanomboka nazoto nitady vaovao ireo mpampiasa aterineto momba ny isan'ireo namoy ny ainy. Nifantoka betsaka tamin'ny fampiadiana ny isan'ireo tra-doza ny adihevitra tamin'ny Twitter sy ny tambajotra sosialy.
Tsy mahagaga fa toa tsy nahatsapa tena ho voakasika tamin'ny zava-nitranga ny fahitalavi-panjakana Toniziana TV7 araka ny soratan'ny Nawaat  (@nawaat ), vohikalam-baovao tsy miankina:
Mandefa fampisehoana mozika ny fahitalavi-panjakàna nefa mitifitra bala tena izy amin'ireo mpitolona ny manam-pahefàna #Sidibouzid
The Moorish Wanderer (@MoorishWanderer ) avy any Maraoka, dia maneho ny heviny. Mi-tweet izy:
Manahy fa hampiantso ny miaramila i #ZABA (Zine El Abidine Ben Ali). Nisy fikomiana ve tao amin'ny Tafika/polisy? Satria raha tsy izay dia ho be ny rà mandriaka #Sidibouzid
Nanaraka akaiky ny tranga i Nasser (@Weddady ) avy any Maoritania. Namoaka ny anaran'ireo tra-doza hita tany amin'ny faritr'i Kasserine izay heverina ho nanaparitahana miaramila maro izy raha nitanisa ireo mpamoaka vaovao sy rahalahy mpi-tweet any an-toerana:
Anaran'ireo maty sasany tamin'ny alina navoakan'ny #Tunisia regime: Marwane Jamli, Mohamed Oumari, Ahmed Boulabi Nouri Boulabi Abdelkader Boulabi #Sidibouzid
Teo am-pitsidihana ny tanànan'i Regueb any amin'ny Sidi Bouzid Governorate izay nanombohan'ny rotaka efatra herinandro izay ny mpitoraka blaogy iray, Lina Ben Mhenni, raha nanao sorona ny tenany ny mpianatra anjerimantolo iray, Mohamed Bouazizi noho ny fahakiviany, taorian'ny nakàn'ny polisy ny talantalana nampiasainy hivarotana voankazo sy legioma. Nilazalaza ny zavatra hitany izy :
Alina aho tany Regueb rehefa naheno momba ny fifandonana teo amin'ireo mpitolona sy ny mpitandro filaminana ary ny fahafatezan'ny olna maro voatifitry ny polisy. Anio olona 5 no maty : Manel Boallagui (26) sy ny renin'ankizy roa, Raouf Kaddoussi (26) , Mohamed Jabli Ben Ali (19), Moadh Ben Amor Khlifi (20), Nizar Ben Ibrahim ( 22) . Tsy afaka manoratra ny andinindininy aho izao!; Rehefa elikely atako. Avelako hanazava ny rehetra ny sary.
Namoaka ny sarin'iray tamin'ireo tra-doza i Lina:
Sary avy amin'i Lina Ben Mhenni (navoaka eo ambany fiarovana Creative Commons License BY-NC-ND)
Khanouff, izay voasivana ny blaoginy any Tonizia, dia manamarika ny tsy fahampian'ny hetsika avy amin'ny governemanta tandrefana  [Fr] na dia eo aza ny fiakaran'ny isan'ny tra-doza:
Mitohy ny fanisàna maty. Ry governemanta tandrefana, mba lazao anay hoe hoatrinona ny vidinao? Hatriza ny taham-pahafatesana tokony hotratrarinay izay vao hiala amin'ny fiarovanao ireo “ondrikelinao” ireo ianao! Fahafatesana firy no ilain'ny Quai d'Orsay, sy ireo mpanodikodin-doha mpanao kolikoly hafa izay vao hietsika? Mba teneno anay hoe rà firy litatra no ilainao e! Firy! Fahafatesana firy no ilainareo ry andriamatoa isany?
fléna bent flén dia mpitoraka blaogy Toniziana. Maneho ny heviny momba ny zava-mitranga any amin'ny fireneny izy ary manoratra ity tononkalo fohy ity [Fr] (ampahany):
Tsy te-hanoratra aho
Nefa tsy mahita tory
Vokatry ny kafe? Mbola loza noho izany …
Tsy te-hanao rima aho
Nefa tsara kokoa noho ny manao baiko moana izany
Te-hitatitra heloka aho
Iray hafa amin'izao fotoan-tsarotra izao ..
Tsy te-hitomany aho
Nefa tsy tanako
Te-hamono anay ry zareo…
Toa voaporofo fa nandaitra ny sainam-pirenena sy ny hiram-pirenena nampiasaina ho mariky ny fivondronan'ireo mpitolona. Nampiasa ny sainam-pirenena hanandratana ny heviny ho heno koa ireo mpitoraka blaogy.
Tamin'ny fampisehoana fiaraha-miory amin'ireo tra-doza sy ny fianakaviany, ny mpitoraka blaogy bokOussama dia nanolo-kevitra ny hametraka saina vaovao ho marika ao amin'ny tontolon'ny blaogy  [Fr]. Manoratra izy:
Ny loko mena, mena tahaka ny ràn'ireo maritiora nilatsaka omaly tany Kasserine sy ireo faritra hafa any Tonizia. Tsy hiverina amin'ity saina ity ny loko mena raha tsy miverina ny fahamendrehana sy ny fahalalahana ho an'izay mendrika izany amin'ity firenena ity.
Sary avy amin'i vie d
Ilay mpitoraka blaogy Adel koa dia nilaza momba ilay saina  [Fr]. Manoratra izy:
Mena ny sainan'ny fireneko, tahaka ny ràn'ireo voatifitra tao an-damosiny tany Sidi Bouzid, mena tahaka ireo tanora am-polony lavon'ny bala tany Kasserine, mena tahaka ny rà izay nifangaro tamin'ny afon”ireo izay nandoro tena.Ny sainan'ny fireneko, ho an'ireo izay nino fa volom-parasy izy, dia mena amin'izao fotoana izao…
Ny loko volom-parasy dia mampiseho ny antoko-mpitondràna RCD.
Ny mpitoraka Bilaogy Insàane Manoratra ity tontonkalo miendrika lahatsoratra ity  [Ar] izay toa manome akony ny ain'ny tolona:
Izaho dia Sidibouzid ary Sidibouzid dia izaho. Mety kanosa aho omaly fa androany kosa aho miantso ny fahamarinana sy ny fahafahana. Androany ianao tsy manana hery intsony ka tsy matahotra aho. Androany dia ny vahoaka, ny repoblika, ny reny latsa-dranomaso, ny voaroakan'ny firenena… Izahay no mibaiko. Mifehy ny anjaranay izahay. Tsy misy tsindrihazolena sy fahanginana intsony.
Farany, Slim dia manasongadina ny anjara asa lehibe ananan'ny media sosialy sy media vaovao  [Fr], amin'ny fampitàna tsy an-kihato ny vaovao mitranga amin'ny firenena. Manoratra izy:
Tsy mitsahatra ny mampiseho ny fetrany ny fahalemen'ny fampielezam-baovao, ny fandisoana vaovao ary ny sivana. Tsy mbola nahara-baovao tahaka izao isika momba izay zava-mitranga. Nangotrakotraka ny fizaràna sary, video ary fijoroana vavolombelona eo noho eo sy miparitaka, tamin'ny Facebook sy Twitter nanomboka tamin'ny fiatombohan'ny hetsika. Tsy mbola akaiky dia akaiky toa izao ny faritra manasaraka ny tontolo virtoaly sy ny tena izy.
Maro ireo maika nilaza fa fielezan'ny tolona toniziana ny hetsika any Alzeria.
Kal manoratra ao amin'ny Moor Next Door dia manamaivana ity fampifandraisana ity . Manoratra izy:
Mifandray kokoa ny nahatonga azy ireo nitranga nifanesy toa izao — vokatry ny polisy mahantra ny fihetsiketsehana Alzeriana ary ny olan'ny tsena izay nitranga niaraka tamin'ny tolona Toniziana. Nefa misy fifandraisany ara-bakiteny ihany izy reto satria ny Alzeria nanao antso firaisan-kina tamin'ireo Toniziana na dia toa miavaka ihany aza ny ankamaroan'ny zava-miseho any Alzeria.
Milazalaza momba ny  [amin'ny teny Alzeriana] olana niteraka ny fihetsiketsehana Alzeriana ny mpitoraka blaogy Alzeriana Hchichathat, ary ampitaha ny toe-draharaha any Tonizia sy any Alzeria, firenena izay natosika hipoaka anaty, araka ny lazainy:
Ampy ho an'ny Alzeriana izay. Resaka Hogra, voninahitra ity. Tandremo ny fampielezan-kevitry ny governemanta izay manambara fa ny fihakaran'ny vidin'ny mofo ihany no niteraka ny korontana sns. Raha ny marina dia misedra olana sarotra noho izany ny Alzeriana. Olana ara-politika naharitra 20 taona izany; nanomboka tamin'ny 1962.
Fomba fijery zarain'i Nawel D. ao amin'ny Algeria 360°  [Fr]. Manoratra izy:
Mitondra hafatra politika goavana ny korontana: ny hetahetan'ny fahafahana. Hetahetan'ny fisokafan'ny fiainana ara-politika, izay mihidy mafy noho ny fitondràna vonjimaika izay tsy misy antony afa-tsy ny hisorohana ny fanandratam-peo miavaka amin'ny rehetra. Antso fanairana ho fanatsaharana ny fomba fitondràna sasany ireo andro efatra nisian'ny korontana. Ary mazava ny hafatra.
Ny blaogy Mots de Tête d’Algérie dia mitatitra ny akon'ireo korontana tany Amizour  [Fr], tanàna any Avaratr'i alzeria. Miteny izy fa tsy voafehy ny tolona:
Nandrangitra ny hatezeran'ny vahoaka ny fiharatsian'ny toe-draharaha. Tsy azon'ny olona hoe nahoana ny mpitolona sasany no nigafy ireo foto-drafitr'asa sy fitaovana iombonan'ny fiaraha-monina. “Naniry ny haneho ny hatezeranay tsy an-kihoa-pefy izahay,” hoy ny tanora mpitolona iray ary nanampy fa “ny sasany dia niaraka tamin'ireo mpitolona mba hangalatra, ka nanjary tsy voafehy intsony ny raharaha!”
Mampiseho olana lalina ny korontana Alzeriana sa fanehoana hatezerana mandalo fotsiny, izany no fanontaniana lehibe dinihan'i Kal ao amin'ny Moor Next Door ao amin'ny lahatsorany . Manoratra izy:
Zavatra miavaka ary voadinika ny revolisiona matetika. Na dia ho fantatra aza any aoriana fa zavatra ambonin'ny hatezerana mandalo fotsiny ireny korontana ireny, tahaka ny hoe na inona entin'ny fanodikodinan-doha na hamaivaniny amin'ny fanantenan'ireo tanora eny an-dàlam-be.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/01/24/11899/
 Nilazalaza ny zavatra hitany izy: http://atunisiangirl.blogspot.com/2011/01/erregueb-january-9th-2011.html
 dia manamarika ny tsy fahampian'ny hetsika avy amin'ny governemanta tandrefana: http://tnkhanouff.hautetfort.com/archive/2011/01/09/combien-de-morts-il-vous-faudrait-messieurs-les-donneurs-de.html
 manoratra ity tononkalo fohy ity: http://abinote.blogspot.com/2011/01/amertume.html
 nanolo-kevitra ny hametraka saina vaovao ho marika ao amin'ny tontolon'ny blaogy: http://bokoussama.blogspot.com/2011/01/drapeau-tunisien.html
 koa dia nilaza momba ilay saina: http://bestadel.blogspot.com/2011/01/la-liberte-seul-horizon-possible-2.html
 Manoratra ity tontonkalo miendrika lahatsoratra ity: http://insane-chutlibre.blogspot.com/2010/12/blog-post_30.html
 Slim dia manasongadina ny anjara asa lehibe ananan'ny media sosialy sy media vaovao: http://carpediem-selim.blogspot.com/2010/12/sidibouzid.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+carpediem55+(Carpe+Diem)
 manamaivana ity fampifandraisana ity: http://themoornextdoor.wordpress.com/2011/01/06/more-on-riots-protests-in-north-africa-notes/#more-5788
 Milazalaza momba ny: http://www.hchicha.net/2011/01/09/01-algerie-un-corps-en-feu/
 Nawel D. ao amin'ny Algeria 360°: http://www.algerie360.com/algerie/le-gouvernement-a-t-il-saisi-le-message-de-la-rue/
 mitatitra ny akon'ireo korontana tany Amizour: http://motsdtete06damizour.unblog.fr/2011/01/09/amizour-trois-jours-demeutes-une-ville-en-ruines/
 fanontaniana lehibe dinihan'i Kal ao amin'ny Moor Next Door ao amin'ny lahatsorany: http://themoornextdoor.wordpress.com/2011/01/09/some-thoughts-on-political-responses-to-the-algerian-riots/#more-5820